Wednesday August 14, 2019 - 11:29:15 in Wararka by Mogadishu Times
Toddobo carruur oo u dhalatay dalka Indonesia ayaa la sheegay inay isku darsadeen Laca ay ku soo iibiyeen Neef Lo' ah, si loo qalo Ciiddan Al-Adxa. Carruurtaasi waxay muddo hal sanno ah kaydinayeen Lacagtaai, oo ay ugu talagaleen inay mar uun k
Toddobo carruur oo u dhalatay dalka Indonesia ayaa la sheegay inay isku darsadeen Laca ay ku soo iibiyeen Neef Lo' ah, si loo qalo Ciiddan Al-Adxa. Carruurtaasi waxay muddo hal sanno ah kaydinayeen Lacagtaai, oo ay ugu talagaleen inay mar uun ku soo iibiyeen Neef la qalo maalmaha ciidda ee Udxiyadda.
Wiilashaasi waxay ku nool yihiin magaalladdaBogoree Gobalka Galbeedka Java, waxayna 60-KM dhanka Koonfurta kaga toosan tahay Caasimadda dalkaasi ee Jakarta.
Antoni oo ka mid ah Wiilashaaasi oo la hadlay Wakaalladda Wararka Turkiga ee Anadolu waxa uu sheegay inay Fikraddaasi ka timid saaxiibkiisa Abu Bakar Sadiiq mar ay ku kulmeen MasjidkaAs-Salafoo ku yaalla TuulladdaArdioee magaalladdaBogorbishii September ee saannadkii hore.